Messi’s Down Fall: Messi oo qirtay Hoos U Dhac Ciyaareed
HomeWararka MaantaMessi’s Down Fall: Messi oo qirtay Hoos U Dhac Ciyaareed
21/02/2015 Abdiwahab Ahmed
Xiddiga kooxda Barcelona Lionel Messi ayaa qirtay in uu idhsbeddel weyni ku yimid qaab ciyaareedkiisa marka la barbar dhigo toban sannadood ka hor.
Messi oo afar jeer ku guuleystay xiddiga adduunka ayaa waxa uu toddobaadkii hore u saftay Barcelona ciyaartii 300aad ee horyaalka La Liga, iyo isagoo xulkiisa qarankana u ciyaaray 95 kulan. Weli waxa uu haystaa fursad uu ku ciyaaro ku dhowaad toban sannadood oo kale, maadaama ay da’diisu tahay 27 jir kaliya.
“Imika lama mid ihi markii ay da’daydu ahayd 17, 18, 19, 20 ama 21, markaas oo aanu jidhkaagu daal dareemaynin. Marka aad weynaato daal ayaad dareemaysaa, imika taxadar ayaan sameeyaa anigoo ku dedaalaya waxyaabaha aan cunayo in aan iska hubiyo” sidaas ayuu yidhi Messi.
“Waxyaabo badan ayaa iska kay beddelay sidii aan ahaa markii aan kubadda bilaabay, waa aan weynaaday waxyaabo bandanna waan ka bartay gudaha iyo dibedda garoonkaba. Imika Messi oo gaboobay ayaa idinla jooga” ayuu raaciyey laacibka reer Argentine.
Bilowgii xili-ciyaareedka waxa mugdi galay mustaqbalkiisa kooxda Barca iyadoo la shaaciyey in uu ka tegi doono naadigiisa uu cimrigiisa oo dhan u soo ciyaarayay. Waxa iyaguna u dheeraa dhaawacyoo hoos u dhigay qaab ciyaareedkiisa, balse waxa uu hadda ku adkaysanayaa in uu fiican yahay, arrimihii oo dhamina iska dhamaadeen.
Sucuudiga Oo Diiday Inay Falastiiniyiinta Kula Ciyaaraan Daanta Galbeed Ciyaar Isreeb reebka Koobka Aduunka Ah
Ancelotti: ‘ Di Maria Wuxuu Man United Ugu Biiray Lacag Daraadeed’
Bale Oo Heshiis Cusub U Saxeexaya Real Madrid
03/01/2015 Abdiwahab Ahmed